मोदीको भ्रमणबाट नेपालले लाभ लिन सक्नुपर्छ «
नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतका प्र्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही वैशाख २८ गते नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । दुईदिने राजकीय भ्रमणका लागि उनी नेपाल आउन लागेका हुन् । हाल चीन भ्रमणमा रहेका उनी त्यहाँबाट फर्किएलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । मोदीको नेपाल भ्रमणलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उनका प्रतिनिधि र सुरक्षा निकायको टोलीले समेत नेपाल आएर निरीक्षण गरिसकेको छ । जनकपुरसमेत जाने भएकाले त्यहाँको सुरक्षालाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन गरिसकेका छन् । १२ बिघामा नागरिक अभिनन्दन, अरुण तेस्रोको शिलान्यासलगायतका विषयमा दुई पक्षबीच छलफल भइरहेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भ्रमणका लागि भारतीय समकक्षी मोदीलाई निमन्त्रण दिएका थिए । नाकाबन्दीका कारण पहिलो पटक नेपाल आउँदाजस्तो यसपटक मोदीको भ्रमणप्रति नेपाली जनता सकारात्मक देखिएका छैनन् । यसपटक मोदीको भ्रमणले नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा लागेको घाउ पुर्न सक्ला ? नेपालमा बढ्दै गएको भारतविरोधी राष्ट्रवादको मनोविज्ञान बदल्न सक्ला ? चासोका साथ हेरिएको छ । आफ्ना छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरिरहेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आसन्न नेपाल भ्रमण र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा केन्द्रित रहेर केही राजनीतिक दलका नेताहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
दुईतर्फी फाइदाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ
पूर्व अर्थमन्त्री एवं अध्यक्ष, एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनु खुसीको कुरा हो । उहाँ मूल कुरा आर्थिक सम्पन्नतामा केन्द्रित हुनुहुन्छ र गरेर पनि देखाइरहनुभएको छ । यो क्षेत्रकै ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो भारत । भारतले आफ्नो छिमेकीलाई पनि मौका उपलब्ध गराएर एउटा उदार र नयाँ मनस्थिति देखाउनुपर्छ । भारतको आर्थिक सम्पन्नताबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्नुपर्छ । अर्को कुरा, हिजो नेपाल–भारतबीच के भएको थियो सम्झेर मात्र हुँदैन । संविधान जारी भएपछि अघोषित नाकाबन्दी भएकै हो । नेपालप्रति भारतको दृष्टिकोण पनि त्यतिबेला गलत देखिएको हो । प्रभावशाली नेताका रूपमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो कुरा पक्कै बुझ्नुभएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा जाँदा देखाइएको सम्मान र सद्भावले पनि त्यो देखाएको छ ।
नेपाल भारतबीच नयाँ उचाइमा सम्बन्ध स्थापित हुनुपर्छ । आपसी विश्वास र आपसी हितमा उत्साही भएर नेपालले भारतसँग फाइदा लिन सक्नुपर्छ । मुल कुरा आर्थिक सम्बन्ध नै हो । नेपालका युवाले रोजगारी पाइरहेका छैनन् । ठूलो बेरोजगारीको समस्या छ । नेपाली उत्पादनले भारतमा बजार पाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले भारतसँग के–के विषय उठाउने हो, योजना बनाउनुपर्छ । ती योजनाहरूमा भारतको सहयोग लिनुपर्छ । व्यापारिक रूपमा नेपालले भारतसँग फाइदा लिनुपर्छ । अहिले पनि सिमानामा अनौपचारिक व्यवधान छ । प्रयोगशालामा परीक्षणका नाममा होस् वा अरू कुराका नाममा होस् । यो हटाउनुपर्छ । यसलाई हटाउन नेपाल सरकारले प्रस्ताव गर्नुपर्छ । भारतका लागि नेपाल ठूलो बजार हो । नेपालका लागि भारत मात्र होइन, भारतका लागि पनि नेपाल महत्वपूर्ण छ । भारतका लागि नेपालको पानी महत्वपूर्ण छ । एकतर्फी मात्र फाइदाका हिसाबले हेर्नु हुँदैन । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दुईतर्फी फाइदाको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । दुवै देशले एक–अर्काबाट फाइदा लिनुपर्छ । परस्परमा राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । पहिलो पटक नेपाल आएको यति छोटो समयमै भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनु राम्रो कुरा हो । यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ ।
मोदीलाई अन्तर्मनदेखि स्वागत गर्छौं
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा गइसक्नुभएको छ । उताबाट, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छिट्टै नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । यसरी कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री अझ भारतको प्रधानमन्त्री नेपाल आउनु र नेपालको प्रधानमन्त्री भारत जानु सकारात्मक र महत्वपूर्ण कुरा हो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुभएको छ । उहाँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यो तेस्रो भ्रमण हो । अन्तर्मनदेखि उहाँलाई स्वागत गर्छाैं ।
प्रधानमन्त्री नेपाल आउनु नै राम्रो कुरा हो । आएपछि हुने छलफल सकारात्मक हुने नै छ । यसपटकको भ्रमणमा उहाँको जनकपुर भ्रमण हुने सम्भावना छ । जानकी मन्दिर भ्रमणदेखि नागरिक अभिनन्दनको कुरा छ । सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध त छँदै छ । जनस्तरको सम्बन्ध झन् महत्वपूर्ण छ । दुनियाँमा भारतको प्रभाव बढ्दो छ । ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतबाट नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको समृद्धि र विकासको पक्षमा कसरी त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ, हामीले सोच्नुपर्छ । यहाँको विविधतालाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालका दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन दुवै शक्तिशाली देशका रूपमा दिन–प्रतिदिन थप बलियो हुँदै गएका छन् । यसलाई नेपालले अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
भारतसँग नेपालको करिब १६ सय किलोमिटर खुला सिमाना छ । त्यसबाट नेपालले फाइदा लिइरहेको पनि छ । अझै फाइदा लिनुपर्छ । रेल्वेको कुरा अगाडि बढेको छ । अमलेखगन्ज पाइपलाइनको कुरा अघि बढेको छ । हुलाकी सडक नेपालको मेरुदण्डका रूपमा छ । यी सबै योजनामा भारतको सहयोग छ । शक्तिशाली देश भारतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण सकारात्मक छ । प्रदेश नम्बर २ मा उहाँ आउने कुराले हर्षित छौं । प्रदेश २ को सरकारले जानकी मन्दिर दर्शनदेखि नागरिक अभिनन्दनमा यहाँका अरू निकायसँग पनि समन्वय गरेर राम्रो वातावरण बनाउनेछ । उहाँको यो भ्रमणले प्रदेश २ को सरकार, जनता सबै हर्षित छौं । उहाँलाई अन्तर्मनदेखि प्रदेश २ मा स्वागत गर्नेछौं ।
नेपालको हित हेर्नुपर्छ
नेपालविरुद्ध भारतले नाकाबन्दी गर्दा एमालेले त्यसविरुद्ध अडान लियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओेली प्रधानमन्त्री रहेको सरकारले जुन अडान प्रस्तुत ग¥यो, प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत जाँदा भारतले देखाएको व्यवहारले नाकाबन्दीका बेला एमालेले र एमाले नेतृत्वको सरकारले राखेको अडानको प्रभाव भारतमा परेको देखिन्छ । आगामी दिनमा विगतमा जस्तो रबैया हुनेछैन । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो । पञ्चशीलका आधारमा, समानताका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अघि बढ्नुपर्छ । त्यही दिशामा नेपाल भारतसम्बन्ध अगाडि जाओस् भन्ने चाहन्छु ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हुन लागेको नेपाल भ्रमणलाई दुईवटा सन्दर्भबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउने र दोस्रो भारतले गर्ने लगानी होस् वा अरू विषय नेपालको हितमा हुनुप¥यो । दुई देशका बीचमा सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ । तर, भारतले नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने कुराको सम्मान गर्नुपर्छ । नेपाल र भारत दुवै स्वतन्त्र राष्ट्र हुन् । त्यसैले समानताका आधारमा सम्बन्ध हुनुपर्छ । हामीलाई भारतको अहित गर्नु छैन । नेपालको अहित हुने गरी भारतले पनि केही नगरोस् । भ्रमणका क्रममा नेपालको अहित हुने गरी सरकारले केही काम नगरोस् भन्ने चाहन्छु । दुवै देशको हित हुने गरी जानुपर्छ ।
सम्बन्ध सुधारको सन्देश दिन भ्रमण
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण उनका लागि नाकाबन्दीपछि बिग्रिएको नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । आफ्नै छिमेकी पनि रिझाउन नसक्ने भनेर भारतभित्रै मोदीको आलोचना भएको छ । मोदीको आलोचना गर्नेहरूको ठूलो जमात भारतमा छ । उनीहरूका लागि आलोचना गर्ने एउटा प्रश्न नेपालसँगको सम्बन्ध मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि बिगारेको भन्ने छ । छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध किन कमजोर भयो ? छिमेकलाई हेप्ने, पेल्ने किन भयो ? भनेर मोदीमाथि प्रश्न उठेका छन् । कतिपय राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्ने कुरा कर्मचारीले गर्ने र मोदीले त्यसलाई संरक्षण गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा आफूमाथि नेपालसँगको सम्बन्धका कारण देशभित्रै र बाहिर उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन खोज्नेछन् । नेपालसँग सम्बन्ध सुधार भएको सन्देश दिन खोज्नेछन् । दोस्रो कुरा, उनले भ्रमणका क्रममा केही महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्न सक्छन् । नेपालले संविधान जारी गरेपछि नाकाबन्दी भयो, जसले गर्दा मोदीप्रति नेपाली जनता सकारात्मक छैनन् । उनी नेपाली जनतालाई खुसी बनाउन ठूलो आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्न सक्छन् । नाकाबन्दी दुःखद स्वप्न थियो भन्ने सन्देश दिएर भारत नेपालसँगै छ भन्ने सन्देश दिन सक्छन् । उनले आफ्नो भ्रमणलाई भारतका जनतासँग, नेपाल सरकारसँग र नेपाली जनतासँग नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार छैन, सम्बन्ध सुधार भइसक्यो भन्ने सन्देश दिने कडीमा रूपमा उपयोग गर्न चाहन्छन् । त्यस्तै, उनी चीनलाई पनि आफ्नो भ्रमणबाट नेपाल भारतसँग टाढा छैन भन्ने सन्देश दिनेछन् । खास मित्रकै रूपमा भारत छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छन्, जुन उनको भ्रमणको अर्को उद्देश्य रहने देखिन्छ । नेपाल चीनसँग नजिकियो भन्ने चर्चालाई उनी चिर्न चाहन्छन् । भ्रमणका क्रममा उनले त्यसका लगि प्रयास गर्नेछन् ।
तयारी हिसाबले सरकारले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य कस्तो गरिरहेको छ, त्यसबारे त जानकारी भएन । तर, बाहिरबाट हेर्दा राम्रो तयारी भइरहेको जस्तो लाग्दैन । भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रतिनिधि नेपाल आइसके । उनीहरूले स्थलगत निरीक्षण गरिसके । जनकपुर पुगिसके । मुख्यमन्त्रीसँग सीधा संवाद गरिसकेका छन् । उनीहरू मुख्यमन्त्रीसँग सम्पर्कमै छन् । तर, नेपालले मोदीको भ्रमणबाट कसरी फाइदा लिने, त्यति तयारी गरेको देखिँदैन । सरकारले सन्तुलित तयारी गर्नुपर्छ । भ्रमणबाट धेरैभन्दा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।